Antananarivo – Fahalotoan’ny rivotra: matiantoka 50 tapitrisa ariary isan-taona ny orinasa iray | NewsMada
Antananarivo – Fahalotoan’ny rivotra: matiantoka 50 tapitrisa ariary isan-taona ny orinasa iray
Par Taratra sur 20/11/2018
Tanàna anisan’ny maloto indrindra Antananarivo. Tsy tafiditra ao anatin’ny salanisa faritan’ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana (OMS) intsony ny rivotra iainan’ny mponina eto Antananarivo.
Manatombo avo 18 heny amin’ny faritan’ny OMS ny fahalotoan’ny rivotra eto an-dRenivohitra. Mampita izay vokatry ny fanadihadiana izay ny avy amin’ny Onudi, ny Pnud, ny Banky iraisam-pirenena, ny FMI. Manomboka miantraika amin’ny fahasalaman’ny olombelona ny rivotra maloto hatrany amin’ny toekarem-pirenena. Olona folo tsy salama noho ny fahalotoan’ny rivotra, mampihemotra ny asa famokarana mitentina 50 tapitrisa Ar ao anatin’ny herintaona, any amin’ny orinasa madinika sy salantsalany (PME). Mbola manatombo izay fahavoazana izay ho an’ireo olona miasa tena.
Mampihena ny fampiasam-bola ataon’ny mpandraharaha iray ny vola lany amin’ny fanafody hitsaboana vokatry ny fahalotoan’ny rivotra. Olona 9 amin’ny 10 no tojon’io fiantraikan’ny rivotra maloto io eto Antananarivo. Mihena, araka izany, ny vokatra vita, ny ora fiasana, sy fandaniana hafa amin’ny fitsaboana hiantohan’ny orinasa. Na mihodina aza ny orinasa, misy fiantraikany mandavan-taona izany.
Izay no mahatonga ny orinasa sasany tsy misoratra any amin’ny Ostie , ohatra. Ao anatin’ny lalàna ny tsy maintsy hiantohana ny fahasalaman’ny mpiasa, nefa mihemotra ny mpampiasa sasany noho ny fatiantoka mahazo azy ireo. Vitsy ny mpiasa sahy mitory ireny orinasa ireny, satria atody miady amam-bato.
Tombanan’ny OMS fito tapitrisa isan-taona ny olona maty maneran-tany vokatry ny fahalotoan’ny rivotra iainana. 90 % amin’izany, aty amin’ny tany mahantra avokoa. Hita mibaribary izany eto Antananarivo Renivohitra noho ny fahamaroan’ny fiara mamoaka setroka mainty, ny fako misavovona, ny lakandrano tsentsina… Sady voadona ny fahasalamana, mihemotra ny toekarena.